Maxaa ka dhigi kara adeega Amazon SEO?
Si ka duwan sida makiinada raadinta waaweyn sida Google laftiisa, adeegga Amazon SEO waxaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo boostadaada hab sax ah si aad ugu badasho macaamiisha macquul ah ee iibsadaha dhabta ah, halkii ay ka bixin lahaayeen dhammaan macluumaadka munaasibka ah codsiga raadinta ee user. Waxyaabaha ay tahay in dadku marnaba booqan Amazon si ay u helaan xog gaar ah ama gabal cilmi baaris oo la xiriira su'aalaha raadinta. Iyadoo la tixgelinayo in qaybta libaaxyada ee dukaamada raadinaya alaabada ay ka jiraan inay jiraan horeyba u diyaar ah oo diyaar u ah inay iibsadaan, oo leh jagooyinka sare ee sheyga raadinta waxaa jira xaqiiqo ah waxa adeega Amazon SEO loogu talagalay.
Maxaa keenaya Amazon SEO Adeegga Amazon SEO
U soo jeeda - Amazon ma raadinayso taraafikada webka sida matoorada search ugu weyn. Taas bedelkeeda, algorithm-ka raadinta culeyska ah ee A9 waxaa loogu talagalay in lagu helo badeecadda ugu habboon ee iibka iibka iibka iibka ee ugu sarreeya. Si kale haddii loo dhigo, A9 ma fiiriyo sida ugu dhow ee sheygaagu uula socdo baaritaanka raadinta alaabada - cheap chapter 7 bankruptcy attorney. Waxaa loola jeedaa in adeegga Amazon SEO adeegsado waa in diiradda la saaro inta badan isbedelka tirada sii kordheysa ee iibka iibka guuleysta iyo wax kale. Oo halkan ayaa ah doorsoomayaasha ugu muhiimsan ee go'aamiya qiimeynta sheyga ee shay kasta oo ku qoran iibinta halkaas.
Isbedelada ugu weyn ee Amazon SEO adeegga
Suuqa ugu dambeeyay
Waxyaabaha ay tahay A9 ayaa dhab ahaantii bixinaysa dakhliga guud ee iibinta alaabta. Si aad u noqoto mid sax ah, badiyaa waxay ku soo laabaneysaa inta aad iibisay illaa xilligii ugu dambeeyay. Waxaa loola jeedaa in alaabtaada si sahlan u soo saari karto shay kale oo la mid ah iibka - oo keliya bixinta qadar xawli ah ee heshiisyo guuleysi ah muddo gaaban.
Haysashada badan oo la hubiyay ee macaamiil macquul ah ayaa laga yaabaa inay tahay qiimeynta daacadnimo ee ugu wacan ee ku kalsoonaantaada iyo kalsoonidaada. Taas macneheedu waxa weeye inaad siinayso tilmaamo awood leh oo muujinaya in alaabtaadu ay bixiso ay tahay xaqiiqda qiimaha kor ku xusan.
Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah adeegga Amazon SEO waxtar leh. Haa, waxaad heshay xaq - guji iibka (ma gujisid qiimaha) waxaa loola jeedaa in uu macmiilka u hogaamiyo hal tallaabo oo dheeri ah si ugu dambeyntii loo gaaro go'aanka ugu dambeeya si aad u iibsato, halkii aad gujin lahayd oo bixi lahayd.
Waxaa laga yaabaa inuu u muuqdo mid aan maskaxda lahayn, laakiin dejinta sicirka saxda ah ee ku haboon iyo haynta garaadka la aqbali karo waa arrin kale oo weyn ee raadinta Amazon darajo. Wax walba waa wax fudud - dadku waxay raadinayaan qandaraasyada ugu fiican ee soo galaya qiimaha quruxda badan oo aan marnaba laga badin. Haddii kale, waxaad ku guuldareysataa inaad ku noolaato tartan dhab ah oo lagu xukumay oo ka talisa suuq-galyada internetka.
Ka dib dhan, Amazon waa nooc kale oo ka mid ah matoorka raadinta si gaar ah loogu talagalay ganacsiga ganacsiga iyo macaamilka ganacsiga, sax? Taasi waa sababta aad si fiican ugu shaqeyneyso maadadaada had iyo jeer lacag bixiso, waa hubaal. Maskaxda ku hay, si kastaba ha ahaatee, si ka duwan sida naqshadeynta heerarka caadiga ah, mid ka mid ah Amazon waa mid xadidan ma aha oo kaliya tirinta dabeecadda, laakiin leh qaab dhismeedka adag oo adag iyo shuruudaha muhiimka ah ee meeleynta ereyga saxda ah.